Global Voices teny Malagasy · 4 Jona 2018
Tantara tamin'ny 04 Jona 2018
Ny Loka Nobel Momba ny Toekarena Joseph Stiglitz dia ho any Paragoay mba handray anjara amin'ireo lanonana fanokanana ny Filoham-pirenena Fernando Lugo. Anisan'ny hanararaotany hanomezana hevitra ny Filoham-pirenena vaovao ihany koa io fotoana io, ary nomarihiny fa tsy handoavam-bola aminy velively izany fanolorana hevitra ataony izany.
Mediam-bahoaka 04 Jona 2018
Tamin'ny volana Febroary 2018, hita tany amin'ny làlan-tany iray ny fatin'i Susan Magara, 28 taona, 21 andro taorian'ny nakan'ny andian-jiolahy azy an-keriny raha teny an-dalana hody ho any Kampala izy, araka ny tatitra avy amin'ny gazety Ogandey .
"Tiako ity zavon-teny ity mba hampiseho ny fandraisan'ny tanora anjara tamin'ny tolona ara-tantaran'i Sarayaku."
"Ny zavamisy amin'izao fotoana izao asehon'ny zavonteny manondro ny fandriapaham-behivavy no mitaratra ny tsy fisian'ny fanairana momba ny lohahevitra."
“Mangataka fandraisana andraikitra amin'ny fiheverana indray ny vaovao momba ny famonoana vehivavy izahay”
"Mangataka fandraisana andraikitra amin'ny fiheverana ny vaovao [momba ny famonoana vehivavy] izahay, izay mihoatra ny zava-misy sy ny tarehimarika . Izany dia momba ny vehivavy izay nijaly sy maty noho ny herisetra. "
"sy momba ny tolona ihany i Sarayaku, fa manana zava-maro tahaka ny zava-maniry, ny biby sy ny fanahy miaro anay.."